Should ga-anara ma ọ bụ jụ mgbochi Covid-19 ma ọ bụrụ na ọ bụ iwu? Ihe a ga-eme? : Martin Vrijland
Should ga-anara ma ọ bụ jụ mgbochi Covid-19 ma ọ bụrụ na ọ bụ iwu? Ihe a ga-eme?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 14 Ka 2020	• 45 Comments
isi mmalite: france24.com
Nke nta nke nta, ọtụtụ mmadụ na-amalite ịhụ na gọọmentị gburugburu ụwa chọrọ ime mgbanwe na-adịgide adịgide n'obodo niile. A ga - eji nwayọ nwayọ “gbanwee ọgụgụ isi” mee ka ọ bụrụ nke na - adịgide adịgide, ebe ị ga-anapụta nnwere onwe gị. Ihe ohuru ohuru ghuru ihe dika otu ocha na ọkara nke ndi mmadu ma ikwusi gi.
Can nwere ike ịnwe ndị na-ahụ maka ọrụ dị oke ọnụ ka ha dụọ gị ọdụ maka otu esi ewulite ụlọ ọrụ gị n'otu mita na ọkara ma ị ga-atụkwasị ọnụahịa ọnụahịa; mkpado ọnụahịa maka onwe gị n'ihi na ị nwere ike ị nweta ihu ọma maka usoro gị yana akara ahịa maka onye ahịa, n'ihi na mmadụ ga-ata ụkwara ahụ mmado na ọkara na ọkara nke ego a na-enweta.
Na mgbakwunye, ogwu covid-19 na-abịanụ ga-abụ iwu.
Wezụga ajụjụ ma a nwalere ụdị ogwu dị otú a ma ọ bụ nke ọma site na ajụjụ ahụ ma anyị achọghị na ngwaọrụ otu na ọkara nke ndị otu: gọọmentị dị aka ike ma ghara ịga ndị na-eme ngagharị iwe. gee ntị.
A ga-eji teknụzụ nyochaa ihe ndị ahụ. Eburu m amụma na akwụkwọ m n’afọ 2019 na m buru amụma na na na ọtụtụ isiokwu na-adịbeghị anya. Teknụzụ ahụ na nnukwu data a ga-akpaghasị, n'ihi na enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ike ịnweta ụdị ọzọ na-atọ ụtọ. Ọtụtụ na - arụ ọrụ ugbu a maka nnukwu ụlọ ọrụ ndị na - enye ICT ngwọta ma ọ bụ maka ụlọ ọrụ gọọmentị na - ahụ maka na ha nwere ike ịnọgide na-akwụ ụgwọ ụlọ ha ma na-elekọta ezinụlọ ha. Ndị ahụ nwere ike ịhụ na ihe adịghị mma, ma a bịa n'ịhọrọ ịhọrọ, ihe ka ọtụtụ na-ahọrọ irulata isi na ego ha ga enweta.
Anyị niile maara ugbu a ụdị ọha ọhụụ a ga-adị. Thelọ ọrụ mgbasa ozi na steeti ahụ na-ekwusi ike na ire ere dị mkpa yana otu esi webata ya bụ usoro site na nzọụkwụ. Nzọụkwụ site na nzọụkwụ, nke mere na ndị mmadụ nọgidere na-ekwere na ha bụ usoro dị mkpa iji jide coronavirus.
Usoro a ga-aga na ebili mmiri site na 'imechi eriri ahụ' aka 'ka ikiri mmiri mee ka mmiri na-abịa. Ndi oru nta akuko, ndi okacha amara (mmeputa nke onu ogugu) na ndoro-ndoro ochichi ga egosi anyi, mgbe oge nke iji ruo otu mita na ọkara na obere ebe ozo ikwaghari, nbidogharia nke oria corona, emesia iwebata ihe ozo nke ngwugwu site n'aka ndi mmadu. ga-amakụ.
Ndị na-agụ akwụkwọ na usoro mgbasa ozi ọzọ na-achọkarị ozi gbasara otu esi agba anyị. Ọ ga-amasị anyị ịgụ nyocha miri emi banyere otú ọgwụ mgbochi dị ize ndụ dị, etu a ga-esi jiri 5G emetụta anyị, otu ndị ahịa Microsoft nyere anyị asambodo ọgwụ dijitalụ, otu esi Bill Gates tinye ego na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ụlọ ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi, otu esi eji ngwa iji nyere anyị aka. nyochaa. Agụụ na-agụ anyị maka ozi gbasara otu esi achụ anyị na web ka anyị wee wee mee ka ndị ọzọ maa jijiji maka ihe dị egwu na-abịa.
Nke ahụ dị oke mkpa, maka na ọ bụrụ na ịmaghị ihe ọghọm na-abịakwasị gị, ịwụghị amaka na oge. Agbanyeghị, a ga-enwerịrị usoro ọzọ. Anyị ga-abịa mepụta azịza.
N’ebe a websaịtị ịgụọla ọtụtụ ederede banyere etu anyị nwere ike isi gaa n’obodo ebe enweghị ego, ụlọ ọrụ eji arụ ọrụ, igwefoto na nnukwu data mara ebe anyị nọ ma ọ bụ ma anyị nwere ọnọdụ okpomọkụ (ọ nweghị ọnụọgụ 19) onye anyị na ya na-emekọ ihe. Nzọụkwụ ọzọ bụ ijikọ data a niile na ụdị akara akara. Iji ma ọ bụ na-enweghị akara zuru oke nwere ike ma ọ bụ ịpụ n'èzí, site na ụgbọ oloko ma ọ bụ n'ụgbọ elu. Anyị niile nwere ike ibu amụma ya ugbu a. Njikọ nke data ahụ niile na akara dijitalụ enwere ike yana njikọta na njikwa ego dijitalụ gị mezue akụkọ ahụ.
A na-achịkwa anyị n'ime web yana China na-enye ihe atụ nke otu ị si dị ka steeti nwere ike ịmanye ndị mmadụ ịrapara na ya. China gosikwara otu esi ahapụ onye na-emegide ya. Nke ahụ bụ mmetụta akpaghị aka nke ụdị sistemụ a. Na mmechi, ọha mmadụ ga-akpọrọ ya isiala, n'ihi na ọtụtụ ndị n'obodo na-arụ ọrụ maka akụkụ nke 'sistemụ'. Ọ bụrụ na ị nwere ọrụ na ntụgharị, ị na-enye ngwanrọ nchekwa data ma ọ bụ na-enye sistemụ igwefoto, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ dị ka onye ọrụ nyocha ma ọ bụ dịka onye uwe ojii, ị ka ga-ahọrọ ego ị na-enweta. Nke ahụ bụ ka o si aga.
Ọ bụ ihe nzuzu ịsị, "M tụfuo ama ama m ka m wee si na sistemụ pụọ". Anyị na-aga oge ebe ntinye aka na ọha na-aghọ ihe agaghị ekwe omume na-enweghị digiD ma ọ bụ na-enweghị eHerkenning (maka ụlọ ọrụ). Otu a ga - eme na teknụzụ corona ọhụụ. Ọ bụrụ na ịtụfu smartphone gị, ị gaghị enwe ike ịbanye na nnukwu ụlọ ahịa.
Ọ ga-abịara nke ahụ? Nzọụkwụ site nzọụkwụ ọ ga-eleghị anya na-abịa na. Na mgbe ahụ ị ga - alanarị ma ọ bụrụ n’inwe ogige nke aka gị, mana ị ga - enwetakwa mkpụrụ nke gị, nihi na ị ga - enwekwa ike ị nweta afọ ojuju ahụ ogologo oge.
Nzọụkwụ ọzọ ga - abụ na a naghị ekwe ka ị banye ebe ọha ma ọ bụrụ na ịnweghị ọgwụ mgbochi. Nnukwu data ga-ekerekwa na nke a. Ọ bụrụ na ngwa gị kwuru na inwere ọgwụ mgbochi, nnukwu ọnụ ụzọ mbata ga-ahapụ gị ka ị banye; ma ọ bụghị. N’oge ikpeazụ, a ga-eji ngwa dijitalụ jikọtara ya na ahụ gị dochie ụdị ngwa a. Ọ ga-ezu ezu ma ọ bụrụ na ejikọkwara ego nke ụlọ akụ na ihe a niile. Agaghị enwe ụzọ mgbapụ ọ gwụla ma ị họọrọ ibi 'n'ime ọhịa', mana maka nke ahụ ga-abụ oke mmiri tere aka.
Anyị nwere ike na-eti mkpu ihe anyị chọrọ; anyị nwere ike be mkpu na anyị achọghị ya dum, mana ọ dị ka mkpu n'ọzara. Imirikiti na-adabere na 'sistemụ'. Ọ bụ ya mere oge ji bido iche maka: Ọ bụrụ na ịnweghị ike iti 'em, sonyere' em.
Anyi aghaghi imeputa uzo kwesiri ekwesi nke ndi n’aru oru ‘sisitemu’ n’eji nabata. Anyị ga-ewepụta usoro dị mfe ma bụrụ nke ga-ekwe omume nke ga - eme ka ndị mmadụ ghara ichebe ihe ụfọdụ, kama na ha nwere ihe ha kwuru. Anyị agbakwasị ụkwụ ugbu a na mkpebi siri ike si n'elu. Usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị ugbu a na-amanye anyị ịnakwere mkpebi ndị ahụ na-enweghị ụdị ikere òkè ọ bụla. Enwere ike ịme nke a iche. Nke ahụ ga-adị iche.
Enwere ohere! A sị ka e kwuwe, enwere ohere iji otu teknụzụ gbanye ihe niile n'oge a, na-enweghị nke a ịgbanye ọha mmadụ niile elu. Ọ chọghị ngagharị iwe ma ọ bụ ngagharị iwe. Onye ọ bụla nwere ike na-eme ihe ha na-eme.
Naanị ihe na-agbanwe bụ usoro mkpebi. Ndị ozi na ndị isi na-akọ akụkọ banyere okpueze ahụ ma na-agbagha site na iwu na-enweghị nkwenye ndị mmadụ ozugbo ga-agarịrị ndị ahụ. Ndị nnọchi anya mmadụ ga - anọchi anya ndị ozi (ndị na - anọchite anya ndị mmadụ karịa okpueze).
Ihe a niile ga - ekwe omume site n'ụkpụrụ nke ọchịchị onye kwuo uche ya. Na usoro ochichi onye kwuo uche ya, ị ga - ahọpụta ndị nnọchi anya gị n'ịntanetị. Can nwere ike ịghọ nwa akwukwo ma ọ bụ ndị na-eme ugbu a na usoro ịtụ vootu na-ahụ maka ịhọrọ na uto na nkwado. Ọ dị ka usoro ntuli aka dị ka Holland Got Talent na mmemme TV ndị ọzọ. Teknụzụ dị ebe a, enwere ike ịnwe ya ma ọ ga-arụ ọrụ.
Ndị omeiwu a họpụtara ahọpụtara kwesịrị ime ka iwu dị mfe ma were ya gosi ndị mmadụ ka ha kwadoro ma ọ bụ nyochaa. Site na puku kwuru iwu, rue ịdị ọcha, site na ịba ụba rue ogo. Direct ntinye ọha na eze.
Anyị nwere ike ichere ruo mgbe iwu ịgba ọgwụ mgbochi nyere anyị ikike ịhọrọ ịgwọ ọgwụ ma ọ bụ gaa n'ụlọ mkpọrọ, ma ọ bụ anyị nwere ike ijide oge. Anyị ga-ejide ọgba aghara a iji weta mgbanwe. Gbanwee uzo anyi choro! Usoro ochichi onye kwuo uche ya nwere ike dochie usoro ikike dị ugbu a site na ntuli aka ntanetị n'ime ọnwa ole na ole.
Ugbu a bụ oge iji mepụta nkwado maka nke a. Kanye onwe gị n'ime ohere ahụ, chee banyere ya ma gụọ otu o si arụ ọrụ. Oge eruola ime ihe ga-abụ mgbanwe. Pịa bọtịnụ maka ozi ndị ọzọ wee banye na mkpesa.
Ndi ogwu a puru iji nyocha iji megharia DNA gi?
Tags: karịa, ngwa ọdịnala, big, Covid-19, data, ochichi onye kwuo uche, kpọmkwem, er, agba, fvvd, gebeurt, Ajụrụ m, online, ntuli aka, technology, ogwu, ọgwụ ịgba ọgwụ, mgbochi ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, nkwa, wat, jụ, ekweghie, iwu
14 May 2020 na 12: 22
Buru onye isi
14 May 2020 na 13: 16
Mana enwere onwe ya Martin, Jan Peter rụrụ ọrụ ịsụ ụzọ
Onye bụbu Prime Minister Balkenende chọrọ ọgwụ corona n'efu maka mmadụ niile
14 May 2020 na 13: 26
Oh obi ụtọ, nke ọma na ọ nweghị ihe na-echegbu onwe gị.
Ntanetị = si n'ụtụ ụtụ ụtụ ma si otu a pụta site na mmụba ụtụ = abụghị n'efu
17 May 2020 na 15: 23
Ekwenyesiri ike na nke a na-abịa na Madurodam, n'oge na-adịghị anya ma ọ bụrụ na ụkọ mmiri dịkarịsịrị anya n'ihi plasemet a, mkpọchi nke okuko ahụ bụ maka nna. Zuru oke ịbanye n'ọrụ ruru unyi ...
Michael Gove na-ekpughe ihe karịrị ndị na-ahụ maka kọntaktị coronavirus 17,000 ugbu a ka a na - anata - na-eme ihere maka ihe mgbaru ọsọ 18,000 - n'agbanyeghị na-ekwu na a na-ewe ha ego maka ọnwa atọ mbụ.
14 May 2020 na 13: 23
Covid, ya mere no for ID nke acgba ọgwụ mgbochi (2020)
14 May 2020 na 13: 33
Nye ha mkpịsị aka 🖕, Kwuo
14 May 2020 na 14: 41
Ihe iri na iteghete n’azụ Covid nọchiri anya AI, ma ọ bụrụ na ịtụgharị mkpụrụedemede ahụ na ọnụọgụ Yabụ na Asambodo Nleta Vaccination IDentification Artificial Intelligence.
Anyị nwere ike ịkọ ebe data niile zuru ohi, usoro Palantir dị! Sochie na Chọpụta
14 May 2020 na 15: 33
@riffian Kpamkpam !!! AI kwesịrị inye data nri, ọ zuru ohi!
Anyị chọrọ azịza ngwa ngwa banyere nnukwu data data NHS COVID
Gini mere gọọmentị UK ji jụ ịkọwapụta data mbufe 'data a na-enwetụbeghị ụdị ya na' ndị US tech? Ọ bụrụ na anyị enwetaghị azịza, anyị nwere ike ịchọ ha n'ụlọ ikpe.
14 May 2020 na 14: 58
Vidiyo dị mma, nke kachasị nke ikpeazụ bụ ebe m na-ejedebe, ọ bụ ihe mgbaru ọsọ. Ndị nwụrụ anwụ na-agbakarị okwu.
N'ebe a, ọ bụ naanị maka ndị na - agụ akwụkwọ ọhụrụ. Ọ dabara nke ọma, agbakwunyere ọtụtụ ndị ọzọ. Ndị mmadụ na-enyekwa ihe na-enyere Martin aka. Soundda ya doro anya ma nwee ọgụgụ isi. Don't gụghị ihe a ebe ọzọ. Ekwesịrị idobe ebe ya na ikuku. Lee ederede ya banyere mwakpo Ddos na saịtị ya
Nke a dị oke egwu karịa vidiyo ehichapụ nke Jensen 33. Kedu, nke ekwenyero na Yt. M rere uwe ya, ma kwuo na ọ ga-adị mma. O bi na Vondelpark, ya mere enwere ego dika mmiri. Edochiri m okwu m.
Hụkwaa mgbe Jensen na-ekwukarị gbasara akpụkpọ ụkwụ onye agha n’olu ya.
Na ebe a ọzọ ncheta ihe kpatara ị ga - eji nwantị oge ahụ. Ọ bụrụ n’ịmụta ihe dịka ebe a na saịtị a, ị ga-enweta ụfọdụ ihe ọmụma. You mara na ekwesiri ikwere ma ọ bụ ikwere n'ihe niile nke ọnụọgụ ndị a. Ma kwekwala ka ọ banye n’ahụ gị.
14 May 2020 na 18: 34
Kwere. Enweghị ike ịchọta ihe niile Martin na-ede ma ọ bụ na-atụpụta, mgbe ụfọdụ na-achọpụta na ọ dị oke ma ọ bụ na-echeghị eche, mana site na ụda ya dị iche na ọ bụ ilu 'canary na coal nke nnwere onwe ikwu okwu na Netherlands. Saịtị a ekwesiri ịnọrọ ma na-agba ọsọ, ma n'ezie: ndị ọbịa na ndị na-akwado ya, ka mma.
Enwere m ike ikwenye na edemede dị n'elu, mana m ka kwenyere na mgbanwe ndị ahụ achọrọ kwesịrị ịgbasa oge dị ogologo (ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ọtụtụ mmadụ dị ka o kwere mee, ọkacha mma mba ndị ọzọ). A ga-ebu ụzọ mee ndị mmadụ 'chara acha' maka ụdị ntụgharị dị otú ahụ. Ma ọ bụghị ya, ọtụtụ ga-atụ ụjọ, ị ga-enweta ihe ike, ọgba aghara, nhụsianya, nke ahụ agaghị abụ ebumnuche.
Tụlee wmb na onye ụkwụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ -30 na oge oyi nke Sweden. Ọ bụrụ n’ịgbanye ya ozugbo ebe a na-ekpo ọkụ, ị ga-eme ka mmebi ahụ ghara ịdị nkọ. Ọ kwesịrị ịdị nwayọ nwayọ, yabụ dịkwa ka ọtụtụ ndị mmadụ mere. Nye ha afọ 10 ka ha mee nke a (ọ bụ ezie na m na-atụ ụjọ na anyị enweghị afọ 10 iji gbochie iwu agha nke ugbu a ịghọ steeti ndị uwe ojii na-adịgide adịgide).
14 May 2020 na 20: 33
Achọpụtara m na ụda ekwesighi 'ekwenyeghị n'echiche' na 'oke' adịghị mma. Ọ bụrụ na otu ihe anaghị eme nke ọma ma na-ejikwa ọrụ n'aka, ọ bụ gọọmentị na - ejide ndị mmadụ.
Ọ bụghị na echiche Xander dị ebe a na saịtị ahụ dịka ọnụọgụ dị iche na anyị na-agụpụta mkpebi nke onwe onye nke Chineke X gị. Oge erugo ịhapụ ụdị nkatọ a ma mee ihe. Nwee mgbanwe site n'ime.
Ekwenyesiri m ike na e kwesịrị idobe usoro ọhụrụ a na fvvd.nl n'ime ọnwa ole na ole. Anyị enweghị oge ịla n'iyi.
Anaghị m ekwenye n'ihe ị kwuru. Ọ bụrụ na anyị na-eche ọnwa ole na ole, kansụl dị ugbu a agbanweela ọha mmadụ ka ọ bụrụ mita na ọkara nke ọha na-etinye ụdị ụzọ teknụzụ niile nke na-etinye anyị na mkpokọta nchịkwa nchịkwa.
Ya mere, m ga - ekwu: etinyela ya n'okporo ụzọ dị ogologo ma tufuo ya dịka ihe na - enweghị isi. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na enweghị ezi uche na anyị na-eme mkpesa ma na-ede edemede ebe ọ na-adịghị mma yana ebe ọgwụ mgbochi na asambodo dijitalụ nwere ike imerụ anyị ahụ.
Ọ bụ ụjọ na-etinye ya na ntozu nke ndị mmadụ. Ndị mmadụ adịghịkwa njikere maka mgbochi mkpọchi ndị a ma ugbu a anyị ahụla na gọọmentị na-akwado usoro 'enweghị echiche' na 'oke' n'ime izu ole na ole.
Anamekwu na M’wezighi aka ike banyere nkatọ gị ma tụọ aro ka ị kpọọ ndị mmadụ Mee ihe ugbu a. Ọ dị nkeji iri na abụọ ruo afọ iri na abụọ ma anyị enweghị ike ichere afọ iri.
I nwekwara ike jụọ ajụjụ na ngalaba ajụjụ & azịza nke saịtị: https://www.fvvd.nl/qa/
14 May 2020 na 22: 14
15 May 2020 na 07: 03
Ndị na-agwọ ọrịa na-eme amara na-eme ọnya ọnya…
Ọ dị ndị mmadụ mkpa ịma jijiji, mana ọ dị ka ha nọ na nsogbu.
15 May 2020 na 16: 01
Achọtara m azịza gị nye Xander nke dịkwa ọcha n'anya n'ihi na enwere m nnukwu enyo enyo na Xander bụ onye na - adịghị agbanwe agbanwe. Agaghị m ịkọwa nke ahụ. Onye na-agụ ya mgbe niile nwere ike mara ihe m bu n’obi.
14 May 2020 na 13: 37
14 May 2020 na 15: 01
Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na ahụtụbeghị m vidio ahụ, agụtụbeghị TV ma tụgharịrị CD isi awọ. N'ezie dị nnọọ edozie na clip. Ọzọkwa sọkwa egwu maka egwu egwu nke egwu a. N’oge ochie.
14 May 2020 na 13: 56
Usoro mmemme ndị ọzọ buru amụma, etinyelarị ihe odide ahụ na Mpaghara nwụrụ anwụ - usoro PLAGUE na 2003
14 May 2020 na 15: 47
Oge mkpado dị mkpa a na-ekwu okwu banyere corona (ra33oon), Fallda na 1993 na douglas na-enyo enyo dị iche na nke ihu.
iri puku kwuru iri nde mmadụ agaghịzi adị mkpa.
14 May 2020 na 14: 06
A ga-amịcha klas / klaasị etiti ego na ọ dịkarịa ala n’afọ ọzọ, ka ewee nyefee ha n’aka Nna steeti dịka ụmụ aturu.
14 May 2020 na 15: 09
N'ezie ee. N'ụzọ a, mmadụ niile na-atụkwasị obi kpamkpam. Anaghị eche echiche ọzọ n’ihi na echekwara ya. Naanị echekwaa n'ụzọ dị otu a m chere na ị ga - aka mma karịa eluigwe. Ma onye nzọpụta gị bụkwa onye kpachaara anya tinye gị na ezinụlọ gị n'ime abis ahụ. Mana ha ga-ahụ ya na mbụ. Ruo mgbe oge gafechara, ka emechara, enwere ike itinye ọgwụ mgbochi n'ahụ ndị mmadụ na mba ndị a na - atụghị ụdị ọ bụla. Si n'etiti ndị a na-enyo enyo, ma mee ndokwa maka onwe ha. Ọgwụ a kwesịrị imerụ gị ahụ n'ụzọ ọ bụla. Ndokwa ahụ na-akọ akụkọ ahụ dum.
14 May 2020 na 15: 28
N'ebe a, wolf ọzọ na uwe atụrụ Eric Schmidt, ndị a na-echekarị na-etinye aka na ọrụ ịgba ohu a kachasị. Ha tinyekwa onu ogugu anakpo onodu ubochi ha mgbe ha no n’ọrụ
Kpoo ndi ahia ndi mmadu ndi Soros na Gates nwere, Clinton Clinton nwere na Board
Anyị kwesịrị 'inwe ekele' maka nnukwu ụlọ ọrụ ndị 'mmadụ hụrụ n'anya ịmebisị' (Anyị na-akpọ nke a FASCISM)
Ezochiri vidiyo ahụ, kpọmkwem otu ha si arụ ọrụ.
14 May 2020 na 15: 37
https://www.cbsnews.com/news/trump-economic-club-speech-live-stream-president-trump-at-the-new-york-economic-club-today-2019-11-12/ (Trump bụ akụkụ nke nsogbu ahụ, echezọ Q bullshit !! Tụkwasị atụmatụ ahụ, bụ atụmatụ ha)
14 May 2020 na 17: 20
Trump kwadoro ogwu ahụ, lee etu ndị otu Q si emeghachi omume na ya.
15 May 2020 na 16: 41
MAKA: atụmatụ 'Trump' nke onye odeakwụkwọ nta akụkọ gbara na ndị nta akụkọ nọ na nchekwa a na-akọ akụkọ o jigidere - nke dọrọ aka ná ntị ụkọ ahụike, enweghị ego na ọgba aghara gọọmenti etiti ọnwa ole na ole tupu ntiwapụ.
20 May 2020 na 18: 50
ugbu a ka m bidoro ghọta ya nke ọma ...
MEDIA IGNORES ISRAEL NKWUKWU EGO NA-EKWU OKWU OKWU SI ERIC.
14 May 2020 na 15: 46
Hụ ebe a ka ha si jiri aghụghọ were otu egwuregwu ahụ. Ha na-egosi n'ụzọ nkịtị ihe ha ga-eme. Na-aguta ụmụ site na ezinụlọ. N'okpuru nsogbu ahụike, yana n'ihi na ịnweghị ụlọ ịsa ahụ 2 maka iche iche. Kama ka mmadụ gwa gị onye zọrọ ezi megide ya. Na-eweta ezigbo eme. Ma unu nwere otutu ndi ederede, nke a na-akpo iche ibe unu nche. Ya mere, ha nwere nọmba ịkpọtụrụ gị nọmba. Ehee, nwa gị agaghị enwe ike ịhụ gị ọzọ, ma ọ nwụghị site na Covid. Ederede 80123, gụọ 9 na 33. Tụfuo ihe niile ịnwere. Mee America …… .. nke oma
Naanị lelee onye na - eme ihe nkiri, ị ga - ahụ ihe ha na - abanye.
14 May 2020 na 16: 31
Kwe nkwa na New World Order
14 May 2020 na 21: 56
15 May 2020 na 03: 25
Onye obula buliela ntuli aka na ndu ha, debara akwukwo a. Anyị nwere ike ugbu a ịhụ nke ọma ihe na-eme mgbe ị hapụrụ ụmụ nkiri telivishọn ka ọ chịwa ndụ gị. Ọ bụrụ naanị iji nweta ntị na ọ dabere na ụgha, dị ka agụ n'isiokwu a. Otingtụ vootu ọzọ ga-agbanyekwu na mkpọchi.
Anaghị m a mgba ma ọ bụ ịgba ọgwụ mgbochi, kama ka machibidoro. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị ga-alaghachi n'okike wee chọta onwe anyị. Ọbụnadị Jizọs gara n'ọzara iji jikọọ. Anaghị m ekwu na ị kwesịrị ikwere na Jizọs, naanị ihe m na-ekwu bụ na anyị so n'okporo ụzọ ahụ.
15 May 2020 na 06: 30
Ọ dị mma na a ka nwere ndị dọkịta dịka dọkịta German a https://www.youtube.com/watch?v=6bIAXtciwk0&feature=youtu.be
15 May 2020 na 06: 59
Na vidiyo nke dọkịta German na njikọ gara aga ọ na-ekwupụta ihe ọ bụ eziokwu. Na oke nke ịsị na anyị ekwesịghị ịlaghachi azụ "ochie anyị". Nke a bụ eziokwu, n'ihi na ọ pụtara na ochie emeela ka ọ kwe omume ịdagharị anyị n'ọnọdụ anyị nọ ugbu a. Yabụ enwere mkpa ọhụụ, nke abụghị nke otu 1,5 mita nwere usoro onyunyo niile, mana nke ọhụụ bụ nke dabara n'ụzọ kwekọrọ n'ihe Martin's FVVD. Eleghi anya enwere ike itinye ozi na FVVD a?
15 May 2020 na 09: 48
Ekwenyere m na ozi Martin doro anya!
15 May 2020 na 08: 18
Ọbụlagodi m "n’ime ọhịa". Ozugbo anyị ghọrọ steeti zuru oke, m na-eburu ihe m ma alaala. Ọ ga-akara m mma agụụ ịnwụ ebe ọ bụla n'etiti enweghị ebe a ga-ewepụ nnwere onwe m.
15 May 2020 na 09: 47
Echeghị m na ị ga - aga mgbe steeti ndị uwe ojii zuru ezu nọ. uwe ojii = usoro feudal, ị bụ akụkụ nke steeti. N'ime usoro esemokwu, ohu ahụ enweghị ike ma ọlị ịme ihe ọ bụla na-enweghị ikike nke onye nwe / steeti.
Ọzọkwa, ebee ka ịchọrọ ịga ihe niile jikọrọ ọnụ, jikọọ ma na-achịkwa ha. Ana m eche ma ndị bi ebe ị ga-achọ ịga na-eche gị. Asọmpi dịkwa n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu. Anyị nọ n'ọnọdụ siri ike na ya mere anyị ga-edozi ya onwe anyị ebe a na Madurodam. Onu ogugu mmadu adighi aghota ya site na iwere oge rue mgbe ebighi ebi.
16 May 2020 na 10: 51
N'ebe a Martin bụ eziokwu banyere ihe ọgbaghara ahụ niile, yana mmetụta chimeric.
Nnukwu ogwu mgbochi Coronavirus https://patents.justia.com/patent/10130701 n'ihi na Atrouated Coronavirus ka eji eji Vaccine. Ihe nchekwa Chinera https://patents.justia.com/patent/8828407 Chimera Lion isi, ahụ Ewu, ọdụdụ ọdụ "She-Ewu" pụtara n'ụzọ nkịtị "Oge Ego" aka Capricornus nke Egwuregwu Satinian Satọdee; Chimera bụ anụmanụ na-egbu egbu nke e mepụtara site na anụmanụ ndị ọzọ, kpọmkwem ihe Vaccine bụ.
Mpempe nke ala sitere na nkuzi nke Freemasons na akwụkwọ akụkọ ha. N’aka ozo, anyi gha azaghachi ngwa ngwa. Yabụ na ị hụrụ ihe mmadụ ga - enweta ederede nke akara. Yabụ ihe ndị na-eyi ndụ egwu, ma tinye n’ụzọ dị mfe, ha chọrọ igbu gị, ma mepụta onwe ha ụwa ọhụrụ. Lee otu esi enwe otutu ndi mmadu sonyere n'ozizi a.
Ndi ihe omumu ihe nile di ya nma site na ime ya ihe nile.
O buru oke egwu, o gaghi ekwenye na ya.
Sọdọm, Pedophille, 33 Freemason. J Edgar Hoover
Onye isi FBI, olee nkata ọ kpara?
Ọ na-ekwukwa okwu banyere Gilied, onye na-ahụ maka ọgwụ mgbochi. Ihe n’asụsụ Hibru bụụrụ Galeed.
Guo ikpo nke ihe nlere anya aha ya dika Galeed n’agha. Ha abụọ na-aka akara ebe ọgbụgba-ndụ ahụ dị. N'agbata Jekob na laban gen 31:47 (nka bu igosi ihe ha n’eso, obughi ime ka mmadu bia na akwukwo nso)
Pope Francis encyclical Laudato si (akwụkwọ nkuzi) kpọrọ oku ka o gbuo mmadụ ijeri isii.
Lee nkọwa: Ma ihe ha doro anya ịchọrọ ịme. Trump dịkwa ka ọ na-akpọ ndị agha ka ha gbaa ọgwụ mgbochi onye ọ bụla, gụọ ihe nwụrụ anwụ. Na America, nke nwere ngwa agha 400 na aka ya, ga-anọdụkwa nwayọ. Nwere ike ịnwe oyi. Anaghịkwa m akwado ime ihe ike. Ma ndị a na-enyo enyo na-eme n'ezie.
Isi mmalite theocs101ark
17 May 2020 na 12: 21
Aga m ajụkwa ule ndị ahụ, maka na ha nwekwara ike jupụta ọdụ data DNA. Die Schippers dị ugbu a na DSM na onye bụbu onye isi DSM Sijbesma bụ onye na-ahụ maka ule ndị ahụ. Lelee mares na-agba ọsọ, ndị a na-enyo enyo na mbụ na-egwu n'akụkụ abụọ, teta !!
Egwuregwu oche ga-ezu
17 May 2020 na 18: 21
Na ọ ka nwere ndị enyi gburugburu, na-asọ oyi… ... Ọ dịkwa oke mma na emere ka ọ pụta ìhè na nkeji nke 13.33. Lee ka esi edozi esemokwu a. Na otú ndị ohu na-atọ ụtọ. Ọ bụ ihe nwute, ndị ohu na-abụkarị ndị nwere akọ na uche. Enweghị ike ikwu maka ndị niile na - eme ihe nkiri ahụ.
17 May 2020 na 14: 29
Kedu ihe kpatara ọgwụ mgbochi ma ọ bụrụ na enwere ọgwụ zuru ezu megide obere ụdị flu ahụ?
WHO nyere $ 20M Mbupụ Iji Poison COVID-19 Cure - Onye isi ala Madagascar
Site na GreatGameIndia -May 16, 2020
N'ime mmepe na-awụ akpata oyi, Onye isi ala Madagascar kwupụtara na-akpali akpali na WHO nyere $ 20m ihe nkwụ iji gwọọ ọrịa COVID-19. Ugwu ogwu a na-akpọ COVID-19 Organics nke emere site na Artemisia nwere ike ịgwọ ndị ọrịa COVID-19 n’ime ụbọchị iri ka Onye isi ala ahụ kwuru.
18 May 2020 na 13: 33
Na Nigeria, ntọala Billy goates dị n'okpuru enyo na-ebuli elu mgbe ebubo nke iri ngarị, Burundi na Tanzania achụpụla WHO / melinda na ihe ndị metụtara ụgwọ ahụ. Yabụ na ọ ga-ekwe omume, anyị nwere ike ime otu ihe atụ ebe a.
18 May 2020 na 18: 05
Anọgidero na-eju m anya na BMF. Na ọkachasị na enwere ọtụtụ ndị na-agbachitere eze na ntu. N'ihi na ọ na-enye ọtụtụ ọrụ enyemaka. Ọ na - eme ma ọ dịkarịa ala 80% ịlaghachi na itinye ego. Ọ bụrụ na Bill nwere obi ụtọ n’ezie, ya na ndị enyi ya bara ọgaranya gaara azọpụtali ụwa site agụụ na akpịrị ịkpọ nkụ ruo ogologo oge. Kama igwu egwu kewaa ma chịa n’ala ule ya zuru ụwa ọnụ. Na ọ chọghị, ma jiri ụmụ mmadụ dịka anụmanụ. Ndị mmadụ kwesịrị ịpụ iche. Ha nwere nnukwu ego, nwere ike idozi nhụsianya niile dị n'ụwa n'ime otu izu. Agụụ enweghị agụụ, yabụ ọgụ ọ bụla, obere nwatakịrị na eri wdg. Mana ha anaghị eme nke ahụ, yabụ enweghị ezigbo ihe gbasara BMF niile. Hardị nwere ụdị dị ala kachasị njọ, yana enweghị mwute bụ ego kachasị.
20 May 2020 na 08: 46
Anọ m na-eche ma RIVM tụfuola ụdị ndị ahụ nke Imperial College ka oge na-aga, n'ihi na nsogbu adịghị. Ọbụlagodi na-egosikwa na ọ chepụtara data iji kwado otu usoro:
Corona-Modellierung agha “schlimmster Software-Fehler aller Zeiten”
Mehr zum Okwu.
Benachrichtigung über neue Nkeji edemede:
Die Modellierung des Imperial College zur Corona-Epidemie, auf der umfangreich Maßnahmen und Verbote beruhen, weist akwa Software-Fehler auf, sagen zwei weltweit führende Daten-Ingenieure.
20 May 2020 na 10: 46
ị na-agba ara, ụdị ndị ahụ dị oke mma ma tụfuo "IT WOBBLES"
RIVM: onu ogugu ‘wobbles’ n’agbata 0,7 na 1
20 May 2020 na 13: 42
hahahaha idd Wuhan Wiggle ka o buru.
23 May 2020 na 15: 43
" Nnukwu oke ego n'oge nsogbu corona na-eduga ịba ụba: ọ bụ bitcoin ga-agwọta?
Nkwado megide nsogbu gọọmentị Jordie Zwarts na-atụ ụjọ, mana ọ nweghị ihe ọ bụla »
Nleta ha: 2.484.057